Izindaba - Ukwethulwa Komkhiqizo Omusha- I-RGB Dynamic Curtain LED Strip ne-RGB Dynamic LED Panel
Ukwethulwa Komkhiqizo Omusha- I-RGB Dynamic Curtain LED Strip ne-RGB Dynamic LED Panel
Siphusha izinhlobo ezimbili zomkhiqizo omusha - iDynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module.
Isakhiwo ngasinye sixoxa indaba, kanjalo nengaphakathi kufanele. Amapaneli we-lightbox akha amandla ashibilika kalula avela ku-HYM Lighting angakusiza ukuyilungisa leyo ndaba. Idizayini ye-modular iqinisekisa ukuthi ingena kunoma yikuphi okuphakathi, okukhulu noma okuncane, okunesizotha noma okunethezeka. Jabulela ukwenza izinto ezihlukahlukene, usuku nosuku, unyaka nonyaka. Uma uthatha isinqumo sokushintsha ingaphakathi lakho, ungashintsha kalula ukuphrinta kwe-lightbox nokugqwayiza ngakho.
Amapaneli e-Dynamic LED akusiza ukuthi wakhe ubuciko obunamandla ngezindlela ezimbili:
Yenza imidwebo iphile noma ingeze ukunyakaza nomoya ongavamile ezindongeni nasesilingini
Kulula kakhulu ukushintsha okuphrintiwe noma okuqukethwe kwe-LED. Vumelanisa ukulingisa kwesibhakabhaka sakho ophahleni ngokuya ngezinkathi zonyaka, isibonelo: kunamafu entwasahlobo, libalele ehlobo, lina futhi liba neqhwa ebusika.
IDynamic RGB Curtain LED Strip yenzuzo kulula ukuyifaka, sisebenzisa ikhadi lokulawula le-K-8000C ukwenza uhlelo lwe-LED.
IDynamic RGB LED Panel yamukela i-K-8000C yekhadi lokulawula ukwenza uhlelo lwe-LED nge-DMX512 protocol.
Kusukela namhlanje kuqhubeke, indwangu kanye ne-LED ukuthi ikhulume ulimi olusha ukushintsha kwayo okunamandla, ukuphula ukuma nokumisa indaba ngenxa ye-LED akuseyona i-static kepha kungasuswa.
Ngakho-ke ingachaza ukuphrinta esithombeni sendwangu futhi inikeze ukukhanya okulungile le ndawo entsha yokukhanya kwangemuva, lokhu ukusetha isitolo, ukuthenga iWindows, igumbi lokubonisa, imisebenzi, umbukiso weshaveli ephelele: ibhokisi lokukhanya elinamandla, njengebhokisi lokukhanya lendabuko , eyakhiwe ngesakhiwo se-aluminium nokumbozwa kwendwangu yangokwezifiso, kepha yephula iphethini ngemuva kwemodyuli ye-LED, ngokuya ngokufuna kwakho ukufeza umphumela wokubuka wohlelo kuyo.
Imiphumela iyisithombe esimile ngokuhamba kokukhanya futhi ukukhula okucacile kuhlala kugxila kumathrendi amasha nakubuchwepheshe obusha, ukuwunothisa, ukuwenze uthandeke futhi uthandeke. Isebenzisa isoftware-K-8000C ekuhlelweni kwe-LED, izinhlelo ze-LED zizoshintsha ngokuya ngomfanekiso wokuphrinta ngezikhathi ezithile. Ngakho-ke, imishini ilula kakhulu: isakhiwo se-aluminium alloy kanye nesistimu yokubuyela emuva ihlala injalo, kepha ukuthola umkhiqizo omusha, kudingeka kuphela ukuguqula indlela izinto zesibani nezeselula ezingaba ngayo njengoba ushintsho olunamandla nolulula luyisisekelo sekusasa imishini.
Isikhathi Iposi: Feb-16-2020